Gudoomiye kuxigeenka labaad ee BSoomaaliya oo garoowe soo gaaray(Sawirro)aarlamaanka
Posted on May 15, 2016RBC, Wararka
Garowe-(RBC Radio)-Gudoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Dowladda Federalka Soomaaliya Mahad Cabdale Cawad ayaa caawa soo gaaray Magaalada Garoowe ee Caasimada Dowladda Puntland.
Gudoomiye kuxigeenka ayaa saaka ka soo kicitimay Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobalka oo uu malmihii u danbeeyey ku sugnaa waxaana uu soo maray Magaalada qardho halkaas oo uu kula soo kulmay Boqor Burhaan Boqor Muuse.
Gudoomiye kuxigeenka Baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdale Cawad ayaa waxaa duleedka bari ee Magaalada Garoowe ku soo dhaweeyey Gudoomiyaha Gobalka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne,xildhibaano iyo wasiiro xukuumada ka tirsan.
Gudoomiyaha Gobalka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne ayaa soo dhaweeyey gudoomiyaha waxaana uu sheegay in inta uu ku suganyahay Magaalada gudoomiyuh inuu kulamo la qaadanayo qaybaha kala duwan ee Bulshada.
Gudoomiye kuxigeenka labaad ee baarlamaanka Dowladda Federalka Soomaaliya Mahad Cabdale Cawad ayaa ka mahad celiyey soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey kamana hadlin u jeedada safarkiisa.
Socdaalka gudoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli uu socoto soo xulitaanka odayaasha aqalka sare ee soomaaliya iyo baarlamaanka Federalka ee kan hada jooga xigidoona.